MATIU 24 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 24)
Mgbe Jisọs si nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke ahụ na-apụta, ndị na-eso ụzọ ya duruu ya na-achọ igosi ya akụkụ dị iche iche nke ụlọ nsọ ukwu ahụ.
Ma Jisọs gwara ha sị, “Unu hụrụ ụlọ ukwu a? Nꞌezie, oge na-abịa mgbe ọ bụladị otu nkume na-agaghị adịgidekwa nꞌelu ibe ya.”
Mgbe ọ nọdụrụ ala nꞌelu ugwu olivu, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya jụọ ya sị, “Gwa anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-emezu? Gịnị kwa ga-abụ ihe ga-egosi anyị na oge i ji alọghachi na ọgwụgwụ ụwa eruola?”
Jisọs zara ha sị, “Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara iduhie unu.
Nꞌihi na ọtụtụ mmadụ ga-abịa ndị ga-asịkwa, ‘Abụ m Onye nzọpụta ahụ.’ Ha ga-eduhiekwa ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe unu nụrụ ụzụ agha, na akụkọ agha dị iche iche, unu atụla egwu, nꞌihi na ihe ndị a aghaghị ime. Ma ha egosighị na oge nlọghachi m eruola.
Obodo ga-alụso obodo ibe ya ọgụ, alaeze ga-ebilikwa megide alaeze ọzọ; ọke ụnwụ na ala ọma jijiji ga-adịkwa nꞌọtụtụ ebe dị iche iche.
Ma ihe ndị a nile bụ nanị mmalịte ịta ahụhụ nke ga-abịa.
“Mgbe ahụ ndị mmadụ ga-ejide unu nyefee unu nꞌaka ndị ga-ata unu ahụhụ. Ha ga-egbu ụfọdụ nꞌime unu, meekwa ndị ọzọ ka ha bụrụ ọdịndụ ọnwụkamma. Elu ụwa nile ga-akpọ unu asị nꞌihi na unu bụ ndị nke m.
Ọtụtụ ga-ada site nꞌokwukwe ha nꞌoge ahụ. Ha ga-emekwa ka ibe ha maa nꞌọnya, kpọọkwa ibe ha asị.
Mgbe ahụ ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-apụta. Ha ga-eduhiekwa ọtụtụ nꞌokwukwe ha.
“A ga-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke nꞌebe nile ụwa sọtụrụ, nꞌụzọ onye ọ bụla ga-anụ ya. Mgbe nke a gasịrị, ọgwụgwụ oge ga-abịa nꞌikpeazụ.
“Ya mere, mgbe unu hụrụ ihe unu na-ahụbeghị mbụ, nke e kwuru okwu ya site nꞌọnụ Daniel onye amụma, ka ọ na-eguzo nꞌebe nsọ, (onye na-agụ tụgharịa uche ghọta ihe ọ pụtara),
mgbe ahụ, ka ndị nọ na Judia were ọsọ gbalaga nꞌelu ugwu.
Ka ndị nọ nꞌelu ụlọ hapụ ịrịdata ịbanye nꞌime ụlọ ha ịkwapụta ngwongwo ha, tupuu ha amalite ịgbalaga nꞌelu ugwu.
Ka ndị nọ nꞌubi hapụ ịlọghachi nꞌụlọ ha ịchịrị uwe ha.
“Ma ịta ahụhụ ga-adịrị ndị nwanyị di ime, na ndị na-enye ụmụ ara nꞌụbọchị ahụ.
Nꞌihi na oke mkpagbu ga-adị, ụdị nke ụwa na-ahụbeghị mbụ, na nke anya na-agaghị ahụkwa ọzọ site na mmalite ụwa ruo mgbe ahụ.
“Nꞌezie, ọ bụ nanị ma e mere ka ụbọchị ahụ dị mkpụmkpụ, ma ọ bụghị otu a, mmadụ nile ga-ala nꞌiyi. Ma Chineke ga-eme ka ha dịrị mkpụmkpụ nꞌihi ndị ya ọ họpụtara.
“Mgbe ahụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu, ‘Ahụrụ m Onye nzọpụta ahụ, ọ nọ nꞌebe a, ma ọ bụ nꞌebe ọzọ’ unu ekwela.
Chetakwanụ na agwala m unu ihe ndị a nile, tupuu ha emezuo.
“Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla agwa unu na Onye nzọpụta abịala, na ọ nọ nꞌime ọzara, ma ọ bụ na ọ dị ebe o zoro onwe ya, unu ekwela.
Chetakwanụ na ebe ọ ụla ozu dị ebe ahụ ka udele na-ezukọta.
“Ugbu a mụtanụ ihe site nꞌosisi fiigi. Mgbe ọ bụla alaka ya jupụtara nꞌahịhịa ndụ maranụ na ọkọchị na-abịa nso.
Otu a kwa, mgbe unu na-ahụ ihe ndị a nile ka ha na-eme marakwanụ na anọ m nso, na ọbịbịa m dị nnọọ nso.
Ihe ndị a nile aghaghị imezu tupuu ọgbọ a agabiga.
“Ọbịbịa m ga-adị ka ihe mere nꞌoge Noa.
Nꞌoge ahụ ndị bi nꞌụwa ga na-ebi ndụ ha. Ha ga na-akpọkwa oke oriri na ọṅụṅụ. Ụfọdụ ga na-alụ di na nwụnye ha dị ka ọ dị nꞌoge Noa. Ma na mberede, oke mmiri ahụ bịakwasịrị ha, ma Noa banyere nꞌime ụgbọ mmiri ya.
Ndị mmadụ ekwenyeghị na ọ dị ihe ga-eme tutuu oke mmiri ahụ abịa kpochapụ ha nile. Otu ahụ ka ọbịbịa m ga-adị.
“Mmadụ abụọ ga na-arụkọ ọrụ nꞌubi ha, a ga-ewepụ otu hapụkwa onye nke ọzọ.
Ụmụ nwanyị abụọ ga na-akwọ ọka ha nꞌụlọ igwe na-akwọ ọka, a ga-ewepụ otu, ma hapụ nke ọzọ.
Nꞌihi nke a, na-echenụ nche, nꞌihi na unu amaghị ụbọchị Onyenwe unu ga-abịa.
otu a ka unu onwe unu pụrụ isi gbanarị nsogbu site nꞌịnọgide na nche oge nile, nꞌihi na unu amaghị oge m ga-abịa.
Onye a gọziri agọzi ka ị bụ, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ gị nꞌeziokwu mgbe m ga-alọghachi.
Nꞌezie, aga m eme gị onyeisi ihe nile m nwere.
ị malite na-eti ndị ohu ibe gị ihe, sorokwa ndị na-aṅụbiga mmanya oke na-eri, na-aṅụkwa,
Onyenwe gị ga-alọta nꞌụbọchị ị na-atụghị anya ya.
Ọ ga-etikwa gị oke ihe otiti, zipụ gị ka e kpee gị ikpe dị ka onye ihu abụọ. Nꞌebe ahụ ka ị ga-anọ kwaa akwa, taakwa ikikere eze.”